ကလိုစေးထူး: နိုင်ငံ + ပြည်သူ = နိုင်ငံရေး..
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:02 PM
Chan Soe Win said...
နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းချင်တယ်လို့ ကျနော့်ကိုများပြောလာခဲ့ရင် “လဲသေလိုက်” လို့ပြောမိပါတယ်။ “လဲသေလိုက်” မှ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းရမှာမို့ပဲ။
စကားမစပ် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုပြီးခွဲခြားတာလည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်မှာ မရှိပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုကတည်းက အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို မိမိယုံကြည်တဲ့ ဝါဒနဲ့ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေးတော့ လုပ်တယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးတော့ မလုပ်ဘူးဆိုတာ အိမ်ထောင်တော့ပြုချင်တယ်။ အဝှာမပြုချင်ဘူး ဆိုတာလိုပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါတီဝင်ဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကိုယ် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဝါဒရှိတဲ့ ပါတီကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ ကိုယ် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ဝါဒရှိတဲ့ ပါတီကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းဟာ ပါတီနိုင်ငံရေးပါပဲ။ မဲပေးချင်မှ ပေးမယ်။ ဒီပါတီရဲ့ ဒီဝါဒကို ကြိုက်တယ်။ ဟိုပါတီရဲ့ ဟိုဝါဒကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာ မျိုးပါ။ ဘယ်သူဟာမှ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနဲ့ မှတ်ပုံမတင်လည်း ကိုယ့်ပါတီပဲပေါ့။
Mar 26, 2007, 12:05:00 AM
ကိုကလိုစေထူး... တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ဒ်လေးပါ ။ ဒီအတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ ဗမာတော်တော်များများ ရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ။
Seminar မှာ ပြောသွားတဲ့ မိန်းမတယောက်ဆိုတာ ဗမာပြည်ကပါလား ။ သူပြောသွားတာ သိပ်သဘောကြတာပဲ ။ လေးစားပါတယ် ။
ကိုကလိုဆေးထူးရေ ဘလော့ခ် စာအုပ်ထဲ ဒီပို့စ်လေး ထည့် လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ- :) - စတဲ့ စကားပါ ဒါပေမဲ့ ဒါမျိုးတွေ နိုင်ငံသားတွေကို ဖတ်စေချင်တာတော့ တကယ်ပါပဲ- ခြွတ်ချုံကျ နေတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော် အတွက် အင်မတန်ကောင်း တဲ့ ပို့စ်ပါဗျာ-
Mar 26, 2007, 10:52:00 AM
မှတ်ချက်တွေ ပေးပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွေ့တော့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များဆီမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူကြီးမင်းများက `သူတို့ဟာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လုပ်နေပါတယ်၊ ပါတီတခုတည်း ကောင်းစေတဲ့ ပါတီ နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါဘူး´ လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးတာ သတိရမိပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင်တော့လည်း `အမျိုးသား နိုင်ငံရေး´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးက ပြည်သူအတွက် ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလိုလိုနဲ့ အင်မတန်မှ အမြင်လှတဲ့ စကားလုံးကိုးခင်ဗျာ။ အဲဒီလို ခွဲခြားပြောခဲ့တာလဲ သူတို့တွေပါပဲ။ တကယ်တော့ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးပဲဆိုဆို၊ ပါတီနိုင်ငံရေးလို့ပဲ ပြောပြော လူထုရဲ့ တကယ့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်ဖို့က အဓိက မဟုတ်လားခင်ဗျာ။ အခုတော့လည်း သူတို့တွေ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လုပ်တယ် မပြောတော့ပြန်ပါဘူး။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် တည်ထောင်ခဲ့တာပါလို့ အစပိုင်းမှာ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ အသင်းက အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လုပ်နေပြန်ပါသတဲ့။ ထားလိုက်ပါစို့..။ ဒီကိစ္စကို..။
ကျနော် ဒီပို့စ်ကို ရေးခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က `နိုင်ငံရေး´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ ကန့်သတ်မှု နောက်မှာ လူတွေက အစုကွဲနေတာကို မဖြစ်စေချင်တာပါ။ နိုင်ငံရေးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ ဒါဟာ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသူကို ဆန့်ကျင်တာ လို့ မြင်ပြီး တွန့်သွားတတ်တာကို ပြောချင်တာပါ။ တကယ်တော့လည်း အုပ်ချုပ်သူကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေးလာသလိုလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ မိဘက အုပ်ချုပ်သူတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သားသမီးကို `နင်ဒါမျိုးတွေ လုပ်တာနဲ့ ငါတို့ပါ ရောပြီး ဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူး၊ ငါတို့ အသက်ကြီးပြီ´ လို့ ဆိုဆုံးမနေရတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒါဟာ ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံရေးကို တသီးတခြားစီ လုပ်ခဲ့တဲ့၊ လုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုပါပဲ။ နိုင်ငံခြားကို ရောက်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ တ၀က် ၀န်းကျင်လောက်မှာကို `ငါသူတို့ကို ဆန့်ကျင်ရင် ငါ့နိုင်ငံပြန်ခွင့်ရပါ့မလား´ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ကြီးစိုးနေပါပြီ။ ဒါကြောင့်လဲ `ကျနော်/ကျမတော့ဖြင့် နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါ´ လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆိုလာသူတွေ များလာနေပါတယ်။ နေရပ်ကို ပြန်ခွင့်မရမှာကို စိုးရိမ်စိတ် တခုတည်းနဲ့ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသား မဲ့နေလေရော့သလားလို့ တွေးထင်ရလောက်အောင်ကို လစ်လျုရှုနိုင်စွမ်းတွေ ရှိနေကြပါပြီ။ ဒါကို ထောက်ပြချင်လို့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
မဂျစ်တူး… အိမ်သာ တက်တာဟာလည်း နိုင်ငံရေးပါလို့ ဆွေးနွေးခဲ့သူ အမျိုးသမီးငယ်ဟာ မြန်မာတယောက်ပါပဲ။
ကို tesla ရေ… အကို့ ကွန်မန့်စာသားတွေ တခုခု ပြတ်ကျန်ခဲ့သလား မသိဘူးဗျနော်..။
Mar 26, 2007, 4:54:00 PM
နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့လူဟာ နိုင်ငံသားစိတ်ဓါတ် မရှိလို့ပါ။ လူသိများတာ၊ နည်းတာ၊ လူကြိုက်များတာ၊ နည်းတာတွေထက် နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုရေး အဓိကထားလုပ်ဖို့ အရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကိုကလိုစေးထူး ပြောသွားတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကြောက်စရာ၊ ရွံ့စရာ၊ မပြောအပ်တဲ့ စကားလုံးလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သဘောတူပါတယ်ခင်ဗျာ။
Mar 27, 2007, 2:18:00 PM
ကိုစေးထူးရေ မကျန်ဘူးဗျ- ရေး ပုံက ပုံမကျဖြစ်သွားတာ- ဆိုလိုချင်တာက.... စာအုပ်ထဲထည့်လို့ ရရင် အရမ်း ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်က စာသားဟာ နောက်တဲ့စကား (စတဲ့စကား) လေးပေမဲ့ ...... အဲ့လို အဲ့လို- စာအရေးသားက အဲ့လိုကျွှမ်းတာ- ဟားဟား-
Mar 28, 2007, 1:48:00 AM
သူများတွေရေးပြီးမှ ကျမလည်း ရေးလိုက်အုံးမယ် ကိုသံလွင်…။
ဟိုတခါ ကိုသံလွင်ရေးတဲ့ နိုင်ငံ့အရေး = နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ ပို့စ်တုန်းကလည်း ကျမကွန်မန့် ရေးခဲ့ဖူးတယ် ထင်ပါတယ်။
လူဆိုတာ …ဆွေနဲ့ မျိုးနဲ့ နေရင် ဆွေရေး မျိုးရေး လုပ်ရမယ်၊ ရပ်ထဲ ရွာထဲမှာ နေရင် ရပ်ရေး ရွာရေး လုပ်ရမယ်၊ တိုင်းပြည် နိုင်ငံမှာ နေရင် တိုင်းရေး ပြည်ရေး နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လုပ်ကို လုပ်ရပါမယ်။ ဒါမှလည်း လူပီသ တဲ့ လူဖြစ်မယ်လို့ ထင်တာပါပဲ။
အိမ်သာတက်တာဟာ နိုင်ငံရေးလို့ ပြောသွားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့စကား ကျမလည်း သဘောကျမိတယ်။
လမ်းပေါ်က အမှိုက်ကို ကောက်လိုက်တာဟာ နိုင်ငံရေး ဖြစ်သလို လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက် စွန့်ပစ်လိုက်တာဟာလည်း နိုင်ငံရေးပါပဲ။
ဒီနှစ်ရပ်ရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ အပြုသဘောနဲ့ အဖျက်သဘောပါ။
ဒါကြောင့်မို့ …. ဘယ်လို နိုင်ငံရေးမျိုး လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ မိမိရဲ့ ရွေးချယ်ချက် နဲ့ ခံယူချက်ပေါ် မူတည်တယ်လို့ ကျမကတော့ မြင်မိပါကြောင်း။
Mar 28, 2007, 3:48:00 AM
ကျနော် ကျမတို့ နိုင်ငံရေးကိုနားမလည်ဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူး။ နိုင်ငံရေး မလုပ် ချင်ဘူး ဆိုတဲ့လူတွေများနေရင် နိုင်ငံရေးစနစ်မမှန်ကန်လို့ လူဖြစ်ရှူံးပြီး ကျက်သရေတုံး နေရတဲ့ ဘ၀တွေကနေ ဘယ်မှာလာပြီး လွတ်တော့မှာလဲဗျာ။
Mar 28, 2007, 12:28:00 PM
The understanding of the word "Nainganyee" is not different to the people. The differences is afraid from "the reflection and resuls from Military Gov".
(I am sorry that I cannot type Myanmar language. I can read and write very well but I can't type. I tried to type my name and it took more than 30 minutes (my name is not that long)so I gave up to type).
One example: one old lady (She got australian citizenship) invites one anti gov person to her house for dinner once. Later, her sisters and relatives from Burma get sick and she wants to visit back Burma to see relatives and see home town and then apply visa. Her visa application was denied forever with the reason of contact with antigov peoples.
That is whyalot of people understands how strong to act if they have contact with antigov persons.
I know "Nainganyee Thamar" are doing good thing for Burma Democracy. They are doing good job that everybody cannot do.
My experiences: I have been studied in Japan with Japanese Government scholarship from 1995-2001. All type of scholarship have strong requirement for the student that cannot be participated any countries politics including home country. So you may understand what she said fromalady studying in Japan(in your article).
Feb 6, 2008, 2:05:00 PM